Toaka fanaovana kajy, fanaovana kajy online, fiovam-po
Toaka fanaovana kajy
Toaka fanaovana kajy dia mamela anao kajy ra toaka fitanana haavon'ny amin'ny miankina amin'ny vola sy ny karazana mamo toaka, ny firaisana ara-nofo, ny lanjany, ary ny fotoana dia lasa araka ny nisotro. Koa toaka fanaovana kajy dia aoka ho fantatrareo raha afaka hitondra fiara ny fiara amin'ny ra sasany toaka afa-po amin'ny firenena samy hafa.
Ohatrinona no misotro?
milliliters tavoahangy 0.33l tavoahangy 0.5l tavoahangy 0.75l tifitra 50ml wineglasses 0.2l FL Oz
Labiera Strong labiera Martini Gin Whisky Divay Strong divay Brandy Toaka Rôma Tequila Vodka hafa
Ianao dia: Lahy Vavy
Ny lanja: 70kg 80kg 90kg 100kg hafa 50kg 60kg 70kg 80kg hafa
Ora lasa: 0H 30min 1H 2H 3H 4H 5H 6H hafa H
Afghanistan Albania Alzeria Angola Ao Aruba Arabia Saodita Arzantina Azerbaijan Bahrain Bangladesy Barbados Belarosia Belize Bhutan Bolgaria Bosnia sy Herzegovina Botsoana Brezila Burundi Costa Rica Ejipta El Salvador Eritrea Estonia Ethiopia Fidji Gambia Ghana Gibraltar Ginea Goiana Guatemala Guernsey Honduras Hong Kong Hongria India Indonezia Irak Islandy Jamaika Japana Jersey Jordania Kambodza Kanada Kazakhstana Kenya Kiobà Koety Kroasia Kyrgyzstan Lesotho Letonia Libanona Liberia Libya Litoania Malawi Malezia Malta Maorisy Meksika Mongolia Mozambika Namibia Nepal Nicaragua Nizeria Norvezy Nosy Salomon Oganda Oman Pakistan Panama Paraguay Però Polonina Qatar Repoblika Dominikanina Romania Rosia Samoa Shily Singapore Slovakia Soazilandy Sodàna Soeda Suriname Tajikistan Thailand Tonga Tonizia Trinidad sy Tobago Turkmenistan Ukraine Uruguay Uzbekistan Vanuatu Yemen Zambia Zimbaboe ny Bermudas ny Cayman Nosy ny Filipina
Ra toaka afa-po na ny ra toaka fitanana (Bac) dia ny fitanan'i ny toaka amin'ny fandatsahan-drà. Tsy maintsy refesina ho faobe isaky ny hamafin'ny feonao. Toaka fanaovana kajy manome ny tokotokony kajy, ny tena ra mifantoka toaka isan-karazany dia miankina amin'ny anton-javatra ny hafa, toy ny fototarazo makiazy, manokana ny fahasalamana, ny sakafo ary ny vao haingana fanjifàna.
Body matavy fanaovana kajy isan-jato
Kajy ny filamatra lanjany, tena matavy sy ny vatana matavy isan-jato, tsy misy lanjany saborany, vatana endrika karazana, basal metabolism, levitra metabolism sy ny hafa.
Weight tombony fanaovana kajy
Kajy habetsahan'ny kaloria isan'andro ilainao raha te-hahazo ny lanja sy ny hozatra, na mba hihena.
Bevohoka lanja tombony isan-kerinandro fanaovana kajy
Kajy tonga lafatra bevohoka lanja tombony isan-kerinandro.
Tena mahavokatra ny andro fanaovana kajy
Kajy ny tena mahavokatra andro, raha te hampitombo ny vintana hahazo bevohoka.